Lacagtaada / Minnesota.gov
Barnaamijka Hantiada aan La sheegan
Greater MN keliya: 1-800-925-5668
Dhowrista iyo wargelinta macaamiishu waa qayb muhiim ah o shaqada aanu qabano ah maalin kasta xaga Waaxda ganacsiga ee Minnesota. Macluumaadka qaybta waxay kaa caawin doonaa inaad samayso go’aano dhaqaale oo laga warqabo, laysaga ilaaliyo gol daloolooyinka iyo khiyaamada, iyo lagu ilaaliyo macluumaadkaaga dhaqaalaha gaarka ah.
Hantida aan la sheegan
Waxaa dhici karta in aanu hayno wax aad leedahay. Maalin kasta, qofbaa waaya nooca qaab hanti maaliyadeed sababtoo ah beddelka cinwaanka, dhimashada, ama ilowga cad. Maxaa ku dhaca maaliyadahan la iloobo?
Qaybta Hantida aan la sheegan waxay ka msauul yihiin haynta maaliyada laga guuray ama aan la sheegan ama hantida ilaa mulkiilaha xaqa u leh ama dhaxlihiisa la helo. Qaybtan waxay celisay 31 boqolkiiba hantida aan la sheegan ee looga warbixiyay gobolka ee mulkiilaha xaqa u leh iyaddoo la maray barnaamijka hantida aan la sheegan. Mid ka mid 20 dadka degen Minnesota waxa uu haystaa $100 ama ka badan Maaliyada Hantida aan la Sheegan ee Gobolka
Soo he haddii aad hayso hanti aan la sheegan!